IiBrits zicinga ukuba iimaski zobuso kufuneka ziqhubeke ukunxitywa kwiinqwelomoya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IiBrits zicinga ukuba iimaski zobuso kufuneka ziqhubeke ukunxitywa kwiinqwelomoya
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iintlanganiso • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ngaphandle kokucuthwa kwezithintelo, uninzi lwabantu basaziva kufanelekile kwaye kufanelekile ukunxiba imaski yobuso kwinqwelomoya, ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo weenqwelomoya ezininzi.
Abantu abathathu kwabane kubemi base-UK bacinga ukuba iimaski zobuso kufuneka ziqhubeke ukunxitywa ngabakhweli kwiinqwelomoya, ngokophando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-1 kaNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Kukho isivumelwano esibanzi kuwo onke amaqela eminyaka ubudala, kodwa ngabangaphezulu kweminyaka engama-65 abafuna ukubona umgaqo ugcinwa, ityhila iNgxelo yoShishino lwe-WTM, ekhutshwe kwi-WTM yaseLondon, isiganeko esikhokelayo sehlabathi kwishishini lokuhamba, esenzeka kwixesha elizayo. iintsuku ezintathu (ngoMvulo 1 - ngoLwesithathu 3 Novemba) kwi-ExCeL - London.
Xa ubuzwa: Ngaba uziva ukuba iimaski zobuso kusafuneka zinxitywe kwiinqwelomoya? Ama-73% aphendule ewe – aphezulu kakhulu kune-14% engazange ivume. I-13% eseleyo ithe ayiqinisekanga.
Iqela elingaphezu kweminyaka engama-65 lelona candelo loluntu lithandwa kakhulu, nge-82% besithi iimaski kufuneka zinxitywe xa ndibhabha, ityhila uvoto lwabathengi base-UK abayi-1,000 XNUMX.
Abo bakwizigaba zeminyaka ye-25-64 baphantse bahlukana ngokulinganayo kwisivumelwano sabo, kunye ne-73% ye-55-64s; I-74% ye-45-54s; I-73% ye-35-44 kunye ne-72% yama-25-34s ithi abakhweli kufuneka banxibe imaski.
Phakathi kwezizukulwana eziselula, i-62% ye-18-21s kunye ne-60% yama-22-24s bakholelwa ukuba iinqwelomoya kufuneka ziqhubeke nokwenza ukunxitywa kweemaski zobuso kunyanzelekile.
Imithetho yokunxiba imaski yobuso yatshintsha eNgilani nge-19 kaJulayi, xa izithintelo zayehliswa.
Ukusukela nge-19 kaJulayi, akuseyomfuneko yasemthethweni ukunxiba imaski yobuso ngaphakathi eNgilani, nangona u-Boris Johnson ebongoze uluntu ukuba luqhubeke nokugquma ubuso babo 'kwindawo ezixineneyo nezivaliweyo'. Imithetho engqongqo yemaski yobuso iyasebenza eWales naseSkotlani.
Uninzi lweenqwelomoya, kubandakanya iRyanair, easyJet, TUI kunye neJet2 zisebenzisa umgaqo-nkqubo osisinyanzelo wobuso kubo bonke abakhweli abaneminyaka emithandathu nangaphezulu, kunye nabasebenzi bekhabhinethi, ngaphandle kokuba bakhululiwe.
UMlawuli weMboniso weWTM eLondon uSimon Press uthe: "Ngokucacileyo, ngaphandle kokunyenyiswa kwezithintelo, uninzi lwabantu lusavakalelwa kukuba kulungile kwaye kufanelekile ukunxiba imaski yobuso kwinqwelomoya, ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo weenqwelomoya ezininzi."